Farisifo no Yeree Onifuraefo a Yesu Saa no Yareɛ No | Yesu Asetena
FARISIFO YEREE ONIFURAEFO A ƆNYAA AYARESA NO
NYAMESOM MPANIMFOƆ NO YƐ “ANIFIRAFOƆ”
Ɔbarima a wɔwoo no onifuraefo no, na Farisifo no nnye ntom sɛ Yesu na ɔsaa no yareɛ, enti wɔfrɛɛ n’awofo bae. Ná n’awofo nim sɛ, sɛ wɔankasa yie a wɔbɛtumi ‘atu wɔn afiri hyiadan no mu.’ (Yohane 9:22) Ɛba saa a, Yudafo no bɛyi wɔn baako ama wɔn, na ɛbɛma wɔakɔ ahokyere mu.
Farisifo no bisaa nsɛm mmienu yi: “Mo ba a moka sɛ wɔwoo no nifirani no nie? Ɛnneɛ ɛyɛɛ dɛn na seesei ɔhunu adeɛ?” Awofo no buaa sɛ: “Yɛnim sɛ yɛn ba nie, na yɛwoo no no, na n’ani afira. Nanso deɛ ɛyɛeɛ a seesei ɔhunu adeɛ yi deɛ, yɛnnim, na onii a ɔbuee n’ani no nso yɛnnim.” Ɛbɛtumi aba sɛ na wɔn ba no aka nea ɛsii akyerɛ wɔn, nanso na wɔmpɛ sɛ wɔbɛkɔ akɔka biribi ama akɔfa asɛm abrɛ wɔn, enti wɔkaa sɛ: “Mommisa no. Wanyini. Ɔno ara bɛkasa ama ne ho.”—Yohane 9:19-21.
Afei Farisifo no san frɛɛ ɔbarima no bae, na wɔpoopoo wɔn ani kyerɛɛ no sɛ Yesu yɛ nipabɔne. Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hyɛ Onyankopɔn animuonyam; yɛnim sɛ onipa yi yɛ ɔbɔnefoɔ.” Ɔbarima no nso kaa sɛ: “Sɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ a, me deɛ mennim.” Afei ɔde toaa so sɛ: “Adeɛ baako na menim, ɛne sɛ na meyɛ onifirani, nanso seesei mehunu adeɛ.”—Yohane 9:24, 25.
Ná Farisifo no nyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛgyaa asɛm no mu, enti wɔkaa sɛ: “Ɛdeɛn na ɔyɛɛ woɔ? Ɔyɛɛ dɛn na ɔbuee w’ani?” Ɔbarima no de akokoduru kaa sɛ: “Maka akyerɛ mo dada nanso moantie. Adɛn na mopɛ sɛ mote bio? Mo nso mopɛ sɛ moyɛ n’asuafoɔ anaa?” Asɛm no tuu Farisifo no, na wɔkaa sɛ: “Wo na woyɛ ne suani, na yɛn deɛ, yɛyɛ Mose asuafoɔ. Yɛnim sɛ Onyankopɔn akasa akyerɛ Mose; na onipa yi deɛ, yɛnnim baabi a ɔfire.”—Yohane 9:26-29.
Nea wɔkae no maa ɔbarima no ho dwirii no ma ɔkaa sɛ: “Asɛm yi yɛ nwanwa paa sɛ monnim baabi a ɔfire nanso wabue m’ani.” Afei ɔkaa asɛm bi a ɛtɔ asom de kyerɛɛ sɛ ɛnyɛ obiara na Onyankopɔn tie no anaa ɔgye no tom. Ɔkaa sɛ: “Yɛnim sɛ Onyankopɔn ntie abɔnefoɔ, na mmom sɛ obi suro Nyankopɔn na ɔyɛ n’apɛdeɛ a, ɔtie no. Ɛfiri tete bɛsi nnɛ yɛntee sɛ obi abue deɛ wɔawo no nifirani ani da. Sɛ onipa yi mfiri Onyankopɔn a, anka ɔntumi nyɛ hwee.”—Yohane 9:30-33.
Afei, na asɛm no twetwere Farisifo no bo, enti wɔfirii ase didii no atɛm kaa sɛ: “Wo a bɔne mu nko na wɔwoo woɔ yi, wo na worekyerɛkyerɛ yɛn?” Ɛnna wɔpam no firii hɔ.—Yohane 9:34.
Bere a Yesu tee nea asi no, ɔhwehwɛɛ ɔbarima no bisaa no sɛ: “Wogye onipa Ba no di anaa?” Ɔbarima no nso bisaa no sɛ: “Owura, ɔne hwan na mennye no nni?” Yesu kaa no pen sɛ: “Woahu no, na hwɛ, ɔno ara na ɔne wo rekasa yi.”—Yohane 9:35-37.
Ɔbarima no kaa sɛ: “Owura, megye no di.” Yesu mu gyidi a ɔbarima no wɔ ne obu a ɔwɔ ma no nti, ɔbɔɔ ne mu ase. Yesu kaa asɛm a emu dɔ yi kyerɛɛ no sɛ: “Atemmuo yi nti na mebaa wiase: sɛ wɔn a wɔnhunu adeɛ no bɛhunu adeɛ, na wɔn a wɔhunu adeɛ no adane anifirafoɔ.”—Yohane 9:38, 39.
Yesu kaa saa no, na Farisifo no bi wɔ hɔ, na na wɔnim sɛ wɔnyɛ anifuraefo. Nanso yɛhwɛ adwuma a wɔfa too wɔn ho so sɛ wɔbɛkyerɛ nkurɔfo kwan akɔ Onyankopɔn nkyɛn, na yɛhwɛ sɛnea wɔyɛɛ no no a, dɛn na ɛkyerɛ sɛ na wɔnyɛ anifuraefo? Ɛyɛɛ wɔn sɛ wɔnni haw, enti wɔbisaa Yesu sɛ: “Yɛn nso yɛyɛ anifirafoɔ anaa?” Ɛnna Yesu kaa sɛ: “Sɛ moyɛ anifirafoɔ a, anka bɔne nni mo ho. Nanso afei moka sɛ, ‘Yɛhunu adeɛ.’ Mo bɔne no aka hɔ.” (Yohane 9:40, 41) Ná wɔnyɛ akyerɛkyerɛfo wɔ Israel a, anka ɛrenyɛ nwonwa pii sɛ wɔannye antom sɛ Yesu ne Mesia no. Nanso na wɔnim Mmara no, enti nea wɔyɛe no yɛ bɔne kɛse.
Bere a wɔde onifuraefo no awofo baa Farisifo no anim no, adɛn nti na ehu kaa n’awofo no? Farisifo no bisaa wɔn asɛm no, dɛn na wɔkae?
Asɛm a ɛtɔ asom bɛn na ɔbarima no kae a ɛhyɛɛ Farisifo no abufuo?
Adɛn nti na ntease nnim koraa sɛ Farisifo no annye Yesu anni?